booqdaha The awoodaan in ay ogaadaan ururinta qurxoon la xiriira jiri doonta magaalo. From Gallo Roman iyo waxyaabaha Dr Makumbe oo archives. Xusuusaha ka Revolution Faransiis ah in noocyada badan oo farshaxankiisa, farshaxan, alaabta guriga, iyo walxaha farshaxanka ee xilliyada kala duwan!
Haddaad jeceshihiin magaalada Paris iyo jacaylka in aad iskaaga u kobciyo labada dhaqan ahaan iyo shakhsi ahaan, waxaad si fiican ugu raaxeysan doontaa Musee Carnavalet! Waxaad la yaabi doonaa by uruuriyaa oo ay qaali ah, ay naqshadaha, iyo jawiga, kuwaas oo sida caadiga ah ee Paris!
The daaqadaha galaas wasakheeyey (gaar ahaan Window Rose ah), isticmaalka faahfaahin naqshadda sida duulaya buttresses iyo farshaxan this a waajib-arki-aragnimo Paris xorayn. Waayo, fursadaha sawir fiican ee ka Cathedral ka kori munaaradaha dawan ee view shimbiraha-indhaha of Paris a. Wixii aragti ah Cathedral laftiisa, Square Jean XXIII bixisaa a nuqdad wanaagsan in ay qaataan aragti danbe ee taallo qurux badan. Best of dhan? Waa on our 10 Free Waxyaabaha la sameeyo in Paris. maxaad? Waxaad u qiyaasay. Waa bilaash!
Tani dhismaha quruxda badan waxaa markii hore la dhisay sida a meel lagu cibaadaysto. Si kastaba ha ahaatee, maalmahan waxaa la isku beddelaysaa Gorod a. Waxay hayaan hadhaagii dhowr PSG caan ah; Victor Hugo, Marie Curie, Alexandre Dumas magaca laakiin dhawr ah! Sawirka 'Pantheon's silhouette' iyo qubbada ayaa ku yaal xagga sare ee Montagne Sainte Genevieve, buuraha taariikhiga ah ee Quarter Latin.
Sidoo kale ku dhow inay hogaanka aan Free Waxyaabaha la sameeyo liiska Paris For Free. Socodka dhererka Canal St Martin! Tani haray mid ka mid ah kooxaha ugu cadcad my socdaa magaalada this. biyo mareen A nin-dhigay, kanaalka ku saabsan yahay 4.5 km dheer, xira Canal de L Ourcq in reebin ah. Asal ahaan ka dhisay 1802 by Napolean sida ku riixdaan ah out of River Ourcq ah, lagu doonayo in la keeno biyo la cabbi karo oo la cabbo in PSG buuxeen cudurada iman kara sida daacuunka iyo dabadhiig qaba.
Mid kale oo caan ah rugeedka si ay booqasho in uu yahay, Dabcan, free! A Triumphal halka, waxyoonay by Roman halka Tiitos, Taalladaas xusaysa nolosha waddaniyiinta Faransiis oo dagaal Dagaalkii Kacdoonka Faransiis iyo Wars Napoleonic ah. Dureeri Arc been Qabriga Lama yaqaan Soldier of War Great iyo sida calaamad oo olol weligeed ah oo uu soo gubanaya tan iyo Maalinta heshiis xabbad joojin in 1921. Lix reliefs aad muhiim u qurxin guriyo ku kasta oo muujinayay in daqiiqado muhiimka ah ee Kacaanka iyo Napoleonic War. Waxaa ka mid ah aaska General Marceaus, dagaallada Austerlitz, Arcole, Jemappes, iyo Aboukir, iyo Fall ee Alexandria.
Ma u jeceshahay inaad ogaato waxa cusub ee ka dhacaya caasimadda adduunka? Markaas ma seegi fursad ay hal qayb oo ka mid ah shows fashion lacag la'aan ah lagu qabtay la Galeries ku Fayette, kasta Friday at 3 pm. Hubi in aad samayso Boos online, ka hor si loo hubiyo helitaanka on taariikhda loo baahan yahay. Sidoo kale, dhaqdhaqaaqa free kale u fiican, haddii aad la Galeries ku Fayette, waa in ay soo booqdaan Terrace Masaarida mid ka mid ah views ugu fiican ee Paris. Ma uusan xirmin suuqa qaar ka adeeganayay dabadeedna ee shopping laftiisa Arcade, haddii aad haysato waqti dheeraad ah.
Tani qaado ee waxyaalaha Free inuu ku sameeyo Paris waa muddo dheer aan sannadka oo dhan, laakiin waxaad ku raaxeysan kartaa shineemo furan inta lagu jiro bilaha Luulyo iyo Ogosto (Thursday si Sunday) in mid ka mid ah beeraha ee ugu weyn ee magaalada. bandhigtay The kala duwan yihiin shineemo classic in movies ka badan oo casri ah. Ballansan kursi sagxad ah oo loo diyaariyey, waayo, qaar ka mid ah ugu faraxsan yahay filimada sida ugu dhakhsaha badan u helo oo mugdi ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Free Waxyaabaha Si Do In Paris” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/free-things-paris/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europetravel freeparis ParisCity aan xor aheyn paristips Tranride tareen safarka